सेक्स गर्दा अचानक लिङगमा उत्तेजना हराउँछ ? | RABHI
सेक्स गर्दा अचानक लिङगमा उत्तेजना हराउँछ ?
कसरी आउँछ उत्तेजना ?
लिंगमा उत्तेजना विचार तथा स्पर्शबाट आउँछ । मानिसको दिमागमा एउटा सेक्स सेन्टर हुन्छ । जब यो केन्द्र उत्तेजित हुन्छ, त्यसले लिंगतर्फ सन्देश पुयाउँछ । शरीरमा रगतको प्रवाह तेज हुन्छ । पूरै शरीरमध्ये लिंगमा रक्तप्रवाह सबैभन्दा बढी तीब्र हुन्छ । यहीकारण लिंगमा उत्तेजना तथा महिलाको योनिमा तरल पदार्थ उत्पन्न हुन्छ । लिंग उत्तेजित हुन योग्य हर्मोन हुनु जरुरी हुन्छ । पुरुषमा ६० वर्षपछि र महिलामा ४५वर्षपछि हर्मोनको कमी हुन थाल्छ ।
डाक्टरहरुका अनुसार, यस्तोमा ८० प्रतिशत कारण शारीरिक हुन्छ भने बाँकी २० प्रतिशत मानसिक कारण जिम्मेवार हुन्छ कसरी गर्न सकिन्छ यसको उपचार ?
जरुरी : आफ्नो समस्या समाधानका लागि विज्ञको सल्लाह लिनुहोला ।
Posted by kpcat at 10:33 PM
No Comment to " सेक्स गर्दा अचानक लिङगमा उत्तेजना हराउँछ ? "